Baarlamanka Soomaaliya oo Maanta ka doodaya Mowshinkii kalsooni kala noqoshada Dr Saacid – SBC
Baarlamanka Soomaaliya oo Maanta ka doodaya Mowshinkii kalsooni kala noqoshada Dr Saacid
Maanta oo Arbaco bisha May-na ay ku beegan tahay 22 waa maalintii lagu balamay in Baarlamanka la horkeeno Mowshinkii todobaadkii hore xildhinaano ka tirsan baarlamanka Soomaaliya ay ku keeneen xukuumada Raiisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid.
Xildhibaano garaya 100 oo Mowshinkan wada ayaa saxaafada ka sheegay in aysan ka laaban doonin mowshinkiida xoogana saari doonaan sidii ay u muujin lahaayeen wax qabad la’aanta ay sheegeen inay ugu soo rogeen Mowshinkan xukuumada Dr Saacid.
Dhankooda xildhibaano taabacsan Xukuumada mowshinka lagu keenay ayaa iyaguna sheegay in ay kulankaas uga qeyb galayaan sidii ay u difaaci lahaayeen xukuumada una muujin lahaayeen kalsoonida ay ku qabaan.
Maalin nimadii shalay ayaa banaan bax ka dhacay muqdisho loogaga soo horjeestay mowshinka ay wadaan xildhibaanada ka tirsan baarlamanka ee ay ku doonayaan inay ku ridaan xukuumada Raiisul wasaare saacid, waxaana ka qeyb g alay boqolaal dadweyne oo xaafadaha magaalada Muqdisho ka kala yimid.
Xildhibaano ku jiray kuwa Mowshinka wada ayaa iyaguna dhankooda ku dhawaaqay inay ka laabteen mowshinkii ay xukuumada ku soo rogeen ka dib markii ay arkeen sida ay wax u socdaan, iyagoo intaasi ku daray in ay doonayaan xukuumada in ay siiyaan fursad ay ku soo bandhigto waxqabadkeeda .
Sikastaba xaalku ha noqdee dhaq dhaqaaqyadan soconaya waxaa laga cabsi qabaa in ay isku bedelaan is qabqabsi iyo qilaafaad soo kala dhexgala xildhibaanada Baarlamanka Soomaaliya oo sida hada muuqata kala raacsan laba dhinac.